पर्सामा पाँच जना जन्ती आएर बेहुलीलाई मोटरसाइकलमै लिएर गए ! – Everest Pati
पर्सामा पाँच जना जन्ती आएर बेहुलीलाई मोटरसाइकलमै लिएर गए !
काठमाडौँ, बैशाख २३ – लकडाउनकै बीचमा पर्सामा एक जोडिले बिहे गरेका छन् । लकडाउनलाई मध्य नजर गर्दै उनिहरुले सामान्य विवाह गरेका हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्नेका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ ।
लकडाउनकै बीच पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा आज सामाजिक दूरी कायम गरी विवाह संम्पन भएको हो । बेहुला लालमोहनदास चौधरीले बेहुली रुस्तम चौधरीसँग आज बुधबार विवाह संम्पन गरेका हुन् ।
बेहुलाको तर्फबाट बेहुला सहित पाँच जना थिए । भने बेहुली तर्फबाट आफ्ने घरमा परिवार मात्रै उपस्थिति रहेका थिए । विवाह गर्नेका लागि बेहुला लालमोहनदासले तीनवटा मोटरसाइकलमा पाँच जना जन्ती मात्रै लिएर आएका थिए ।
विवाह सम्पन्न भएपछि बेहुलाले बेहुलीलाई मोटरसाइकलमै घरमा लगे उक्त तस्विर यतिबेला सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको छ । उनिहरुको टिका टोलो भएका लामो समय भएको थियो । लकडाउनका कारण कति पएको विवाह ब्रतबन्द र चलचित्रहरु थप्प भएका छन् ।
चालीस पटकभन्दा बढी हड्डी भाँचिएका अनिमेश लकडाउनमा बुबासँग रामाउँदै